တင်းကျပ် Flex ကို PCB - KingSong PCB နည်းပညာ, Ltd
အဆိုပါ တင်းကျပ် Flex ကို PCB ဘုတ်အဖွဲ့ တစ်တင်းကျပ် PCB များ၏သက်တမ်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PCB များ၏အလိုက်အထိုက်နေတတ်ပေါင်းစပ်ကြောင်းပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်အမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအစားအားလုံးကိုထဲမှာ PCB , တင်းကျပ်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေါင်းစပ်မကောင်းတဲ့လျှောက်လွှာပတ်ဝန်းကျင်၏အရှိဆုံးခံနိုင်ရည်ဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်စက်မှုထိန်းချုပ်မှု, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စစ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်သူ, ပြည်မစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းဖြစ်သည် တင်းကျပ် Flex ကို PCB တစ်ဦးအဖြစ်ထွက်ရှိ၏အချိုးအစားအဘို့မှတ် မြေတပြင်လုံး။
1. တင်းကျပ် Flex ကို PCB ဘုတ်အဖွဲ့ကဘာလဲ?
FPC နှင့် PCB ၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှု, Flex ကိုတင်းကျပ် PCB ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်မွေးဖွား Flex ကိုတင်းကျပ် PCB ဘုတ်အဖွဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်နှိပ်ပြီးနောက်, FPC နှင့်တင်းကျပ်ဆားကစ်ဘုတ်ဖြစ်ပါသည်, အဲဒါကိုသက်ဆိုင်ရာ process ကိုလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီအတူတကွပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ supporting ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူဆားကစ်ဘုတ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
တင်းကျပ် Flex ကို PCB ဘုတ်အဖွဲ့ 2. အမျိုးအစားခွဲခြား:
အဆိုပါ Flex တင်းကျပ်ပေါင်းစပ်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် Flex တင်းကျပ်ကပ်လျက်တည်ရှိဘုတ်အဖွဲ့အကြားခြားနားချက်: အခွဲခြားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ, အတင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့ bonding ၏နည်းလမ်းနှစ်ခုအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည် အကယ်. တင်းကျပ် Flex ပေါင်းစပ်ဘုတ်အဖွဲ့နည်းပညာ, Flex တင်းကျပ်ပေါင်းစပ်ဘုတ်အဖွဲ့သီးခြားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ပြန်ပြီးနောက်, ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌တစ်ဦးဘုံမျက်စိကန်းခြင်းနှင့်သင်ျဂွိုဟျအပေါက်ပုံစံဒီဇိုင်းရှိသည်သောပေါင်းစပ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်, ထို့ကြောင့်ဆားကစ်ဒီဇိုင်းကိုတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားသိပ်သည်းဆရှိနိုင်ပါသည် တစ်ခုတည်းသောဆားကစ်ဘုတ်၏ဖိအားပေါင်းစပ်အောင်, signal ကိုချိတ်ဆက်မှုရှိပေမယ့်ပစ္စုပ္ပန်မှာအပေါက်တစ်ပေါက် design.But မရှိပဲ, " Flex ကို-တင်းကျပ် PCB ဘုတ်အဖွဲ့ " ယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်ခုခွဲဝေခြင်းမရှိဘဲ, အပေါငျးတို့သပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်တင်းကျပ်စည်းနှောင်ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်ကုန်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
3. တင်းကျပ် Flex ကို PCB ဘုတ်အဖွဲ့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ:
တင်းကျပ် Flex ကို PCB ဘုတ်အဖွဲ့မူရင်း FPC ထံမှကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ပစ္စည်း, ကိရိယာများနှင့် process.In ပစ္စည်းရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ PCB ဖြစ်ပါသည်, တင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ပစ္စည်း PCB ၏ FR4 ၏ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့ပစ္စည်း PI သို့မဟုတ်ပေ၏ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်, နှစ်ခုပစ္စည်းများပူးတွဲရှိသည်, အပူဖိအားကိုကျုံ့မှုနှုန်းဒါအပေါ်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ဖြစ်ပါသည်။
တင်းကျပ် Flex ကို PCB ဘုတ်အဖွဲ့ 4. အားသာချက်များ:
2. Interface ကိုအလွှာပါးလွှာ
3. က Short ဂီယာလမ်းကြောင်းကို။
ကို aperture ဖွင့်လှစ် 4. အသေးစား။
သောကြောင့် Flex တင်းကျပ် pcb ၏များ၏ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ် FPC နှင့် PCB ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုအထူးကုဖို့သာမန် PCB နှင့် FPC, အထူးဖြစ်စဉ်ကိုထံမှကွဲပြားခြားနားသည်ပထမ, ထိန်းချုပ်မှုတက်အတိုင်းလိုက်နာ, KingSong သည် CAM အင်ဂျင်နီယာဖောက်သည်တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်သင့်မြတ်အောင်လုပ်ကိုင်ပေးရန်စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အညီပါလိမ့်မယ် , ဖောက်သည်ရဲ့ဒီဇိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့အတွင်းအလွှာမှတဆင့်လွှဲပြောင်းဖြစ်ပါတယ် capacity.After, မျက်နှာပြင်ဟာ binding အင်အားမြှင့်တင်ရန်သင် browse ရပါမည်နှင့် polyimide ၏အဝါရောင်အကာအကွယ်အင်္ကျီကိုဖိအားဖြင့်ကာကွယ်ထားသည် PCB စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေလျက်, ဒါ FPC made..The လာမယ့်ခြေလှမ်းတစ် Flex တင်းကျပ် board.It ဖွဲ့စည်းရန်ဖို့ hardboard PCB အတူ PP ပေါင်းစပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘုတ်အဖွဲ့ဧရိယာတစ်ဦးဖြတ်သန်းချော product.After ၏အသွင်အပြင်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့သည်ညစ်ညူးမရနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည် ရေနံတွင်းတူးတွင်း, orifices, ဂရပ်ဖစ်လွှဲပြောင်း, ဂဟေဆက်မျက်နှာဖုံး, ၏မြင့်တန်ဖိုးနောက်ဆုံး product.Due ရဖို့မျက်နှာပြင်ကုသမှုစီးရီး တင်းကျပ် Flex ကို PCB ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်ကုန်သတိထားစစ်ဆေးခြင်း sh ဖောက်သည်ကိုအပ်အားလုံးထုတ်ကုန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်တင်ပို့မတိုင်မီပြုအောက်အက်ဘ။
KingSong တင်းကျပ် Flex ကို PCB ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်ကြွယ်ဝအတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်, ကျနော်တို့ manufacturing.and PCBs ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဖြစ်ခြင်းစဉ်အရည်အသွေးနှင့်တာရှည်ခံသောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်များကိုလည်းအလိုအလျောက် Optical စစ်ဆေးရေး (Aoi) နှင့်အလိုအလျောက် X-Ray စစ်ဆေးရေးသုံးပြီးစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သော application အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှုများကိုသေချာစေရန် (AXI) ပစ္စည်းကိရိယာများ။